“Markii Aan Ciyaaryahanka Ahaa, Waxa aan u Seexan Jiray Si Fiican, Ma Tagi Jirin Makhaayadaha, Waxa Aa Cabi Jiray Biyo Kaliya”:Zinedine Zidane Oo Ka Sheekeeyay Wakhtigii Uu Bilaabayay Kubada Cagta. – Wararka Ciyaaraha Maanta
“Markii Aan Ciyaaryahanka Ahaa, Waxa aan u Seexan Jiray Si Fiican, Ma Tagi Jirin Makhaayadaha, Waxa Aa Cabi Jiray Biyo Kaliya”:Zinedine Zidane Oo Ka Sheekeeyay Wakhtigii Uu Bilaabayay Kubada Cagta.
March 24, 2019 kooxda La Liga, Wararka Maanta 0
Safarkii Zinedine Zidane ee ahaa ciyaaryahanka ayaa ahaa mid aad u dheer oo walib aad u adag.
Zinedine Zidane ayaa shantiisii sano ee uu joogay Real Madrid una ciyaarayay kula guulaystay champions league iyo La Liga isaga oo ka garab ciyaarayay Ronaldo, Raul iyo Figo.
Laakiin talaabadiisii ugu horaysay ayaan ahayn mid fiican oo guulo leh.
“Way ii cadayd ugu horayntii”ayuu u sheegay OTRO “Waxa kaliya ee aan doonayay ayaa ahayd in aan ciyaaro kubada cagta laakiin waxa aan dhibaato ku dareemay Dugsiga Waalidkayna waxa ay ii sheegeen in aan joojiyo kubada cagta”.
“Waxa aan si fiican u ogaa in aanan haysan dabeecad fiican, kadib maalin maalmaha ka mid ah ayay waalidkay ii sheegeen, Waxa aan ognahay in aad wax qalbiga ku hayso sidaas darteed samee wax aad doonayso in aad samayso”.
“Markii aan helay ogolaanshaha waalidkayga, waxa aan diirada saaray waliba wax walba u joojiyay sidii aan u gaadhi lahaa waxa aan doonayay, markii aan imid Cannes waxa aan arkay tababar waxana aan u sheegay naftayda, waa in aan tababarkaas qaato”.
“Wixii intaas ka dambeeyay waxa aan sameeyay wax walba oo aan ku noqon karo midka ugu fiican”.
Kadib markii uu ku biiray kooxda Cannes isaga oo 17 jir ah Zidane ayaa badalay qaab nololeedkiisa si uu ugu fiicnaado ciyaarista kubada cagta”.
“Waxa aan u seexan jiray si fiican, maan ahayn doqon ku meeraysta Makhaayadaha, waxa aan kaliya cabi jiray biyo”ayuu yidhi.
“Waxa aan wax walba u qabtay sidii aan u noqon lahaa xiddiga ugu fiican ee suurtagalka ah, waxa iga go,nayd in aan wax walba oo ay igu qaadato sameeyo si aan uga farxiyo waalidkay, sababta oo ah waxa ay ahayd noloshayda, sidoo kale waxa aan u qabtay si aan uga farxiyo”.
“Si aad naftaada uga dhigto qof la garanayo waa in aad ciyaarto, waa in aad fiicnaato, ugu horayn waa in aad dadka tusto in aad ka duwan tahay qof kasta oo kale sababta oo ah wakhtigaas waxa jiray xiddigo kooban koox kasta waxa loo ogolaanayay mid ama 2 da,yar ah kooxaha”.